Isibambiso kunye ne-Pestle, i-Pestle kunye ne-Mortar, i-Marble Tray - iKingway
Idreyini yaseGreyiti kunye nePestle
Eyona ndawo ibalaseleyo Flat Pan
Kwisiselo okanye isidlo sangokuhlwa
Shijiazhuang Kingway Imp. & Ukuchaza. Co, Ltd yasekwa 2 0 0 8 kwaye ibekwe kwisixeko shijiazhuang, kwiphondo Hebei, China, zothutho ilungile kwaye okusingqongileyo kuyinto entle. Umzi-mveliso wethu wokubambisana ugubungela ummandla oziimitha ezingama-33, 000 kwaye unabasebenzi abangama-82. Kukho imigca emine yokuvelisa njengokuphosa i-DISA, ukumisela kwangaphambili, ukubhala.
Idaka kunye nePestle
Igqibelele ngokutyhoboza iziqholo kunye nokwenza iziqhekeza zesinongo. Ilungele ukudityaniswa kunye nokusebenzela i-guacamole-okanye ukwenza i-pesto kunye nezinye iisosi zerustic.
Igqibelele ekuphekeni nasekuboneleleni izahlulo zemifuno, macala kunye needresi, Ukubonelela ubushushu obungalinganiyo kunye nokushushubeza; Zivale itywina xa incasa ngelixa izibambo zivumela ukuhambisa lula
Isixhobo: Imabula yemvelo okanye ubungakanani begranite: I-20x15x3cm Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Imarble okanye itreyi yegranite: Ogqibeleleyo ukuyisebenzisa kwibhodi yepeki • kulula ukuyicoca. • Ubume kunye nobukhulu bulungelelaniswe. • unxibelelwano ngokutya olukhuselekileyo kwaye sinayo ingxelo ye-LFGB kunye ne-FDA.
Isixhobo: ubungakanani bemabula yendalo: dia.13cm, ubude be-8cm ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka iMarble Mortar kunye nePestle. Ilungele ukudibanisa nokusebenzela i-guacamole-okanye ukwenza i-pesto kunye nezinye iisosi zerustic. • Beka umgca kunye namagqabi e-lettu ukuze uwusebenzise njengesitya esenzelwe zonke iinjongo. • Ukucekeceka ngaphakathi kwendlu yedaka kunceda ekutyeni nasekugayeni izithako. • Ipestle enzima iyakusebenzela, iqinisekisa ukugraya okusebenzayo, ukudibanisa kunye nokuxuba.
Isixhobo: Imarble yendalo okanye ubukhulu begranite: 43x30x1.5cm Ukupakisha: ibhokisi yesipho okanye ibhokisi emdaka Imarble okanye ibhodi yokusika yegranite • Efanelekileyo yokusika okanye yokusebenzela zonke iintlobo zokutya. • kulula ukucoca. • Ubume kunye nobukhulu bulungelelaniswe. • unxibelelwano ngokutya olukhuselekileyo kwaye sinayo ingxelo ye-LFGB kunye ne-FDA.
Phosa i-Iron Precious
igama lemveliso yaphosa intsimbi eguqukayo yomqolo wobubanzi obungama-43x23cm ukuphakama okuyi-1.5cm kwangaphambi kwexesha ukupakisha ibhokisi emdaka okanye umbala webhokisi uphawu olungelelanisiweyo Inqaku lokugcina ubushushu lokugcina ubushushu Ifanelekile kuzo zonke izitovu Igqibelele ukupheka kunye nokusebenzela iinxalenye zemifuno, amacala, kunye neesuphu Ukubonelela kobushushu obungenakuthelekiswa nanto. Ukufudumeza; izimbobo zetywina ekunambeni ngelixa izibambo zivumela ukuthutha ngokulula i-FDA evunyiweyo yensimbi yangaphambi kwexesha elifanelekileyo ivumela ukusetyenziswa kwangoko kunokuba ...
igama lemveliso yaphosa intsimbi encinci yecasserole enobubanzi be-10cm, 26cm ubude be-5cm, 11.5cm ombhombiso wangaphambili wokupakisha ibhokisi elintsundu okanye ibhokisi yemibala uphawu lwento eyenziwe ngokwezifiso Umbala wokugcina ubushushu ulungele zonke izitovu Ugqibelele ukupheka kwaye unike iinxalenye ezithile zemifuno, amacala, kunye neencasa Inika ukugcinwa kobushushu okungafaniyo kunye nokushisa; Izitywina zetywina kwisaladi ngelixa izibambo zivumela ukuthutha ngokulula i-FDA evunyiweyo yentsimbi yangaphambi kwexesha elifanelekileyo ivumela ngokukhawuleza ...
Inani lezinto i-KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm I-Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Iimpawu zentsimbi engenanto kunye nezixhobo zokubamba ilokhwe enkulu yombala obomvu, tyheli, luhlaza, bampinki, mnyama, i-enamel yokuhombisa i-enamel yoku-1. Ukusasazwa kobushushu obuphezulu kunye nokugcinwa 3.Cast ukushisa kweentsimbi ngokuthe ngcembe nangokulinganayo 4.Perity yokupheka okucothayo kancinci: Iqhina lesinyithi elingenanto kunye nokubamba okuluphambili kulawulo olukhulu Indawo yeglasi engaphezulu ayiyi kusabela kwizithako ...
No. 505 Igumbi, iZhongyuan Building, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei Pro, China